Koperativa Tselatra Nitokona ny mpitatitra
Tsy nisy niasa na dia iray aza ny mpitatitra mivondrona ao amin’ny koperativa Tselatra tamin’ny faran’ny herinandro teo.
RN7 Soanierana Taksibe 194 nitrongy andrinjiro, 3 naratra
Tapaka hatramin’ny jiro teny amin’iny faritra Soanierana ambany mihazo an’Ankadimbahoaka, manaraka ny lalam-pirenena faha-7 iny nanodinana tamin’ny 7ora.
Nandritra ny sivy volana no nanatanterahana ny asa vokatry ny fiaraha-miasan’ny fitondram-panjakana sy ny tobim-pamatsian-tsolika Total. Mirefy 2.770 m2 ny fotodrafitrasa, ahitana box miisa 20 sy birao folo. Hitondra tombontsoa lehibe ho an’ireo taksibrosy mampiasa iny lalam-pirenena voalohany sy fahefatra ary fahenina iny ny fahavitan’ity tobim-piantsonana iray vaovao ity. Tena hanara-penitra tokoa mantsy ny fandraisana ireo olona handeha hihazo ny Faritra manomboka amin’ny faran’ny volana janoary na ny volana febroary taona 2018 ho avy io, fotoana hanombohana ny fampiasana azy. Tsy voatery handeha handany fotoana eny Andohatapenaka intsony ny mpandeha iray fa afaka mamandrika toerana en ligne. Azon’izy ireo alefa amin’ny M Vola ihany koa ny saran-dalany. Tsy hifampitadiavana toy ny teo aloha intsony koa ny koperativa sy ny fiara mbola misy toerana malalaka fa avy hatrany dia hita eny amin’ny tabilao. Hafaliana ny an’ireo mpitatitra tafiditra hahazo ity toby fiantsonana vaovao ity. Nanambara kosa ireo lehiben’ny koperativa sasany fa tokony hampiarahana amin’ny fifindran’ireo etsy amin’ny Fasan’ny Karana ho any amin’ny toby fiantsonana vaovao Ambohimanambola izany mba tsy hisian’ny mizana tsindrian’ila. Tonga nitokana ny fotodrafitrasa teny an-toerana niampy ny tobim-pivarotan-tsoliky ny Total, omaly, ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny praiminisitra lehiben’ny governemanta.